Isiokwu nke Chris Orlob na Martech Zone |
Edemede site na Chris Orlob
Chris Orlob Onye isi oche nke ahịa Ahịa na Gong.io. - usoro ikpo okwu mkparịta ụka # 1 maka ndị otu B2B ahịa. Gong na-enyere gị aka ịgbanwe ọtụtụ pipeline gị n'ime ego ha ga enweta site na ime ka ihie ọkụ na mkparịta ụka gị. Ọ na-edekọ, na-edegharị, na nyochaa oku ahia obula yabụ ị nwere ike ịchụpụ ire ahịa, chọpụta ihe na-arụ ọrụ yana ihe anaghị arụ ọrụ, ma bulie ụgwọ ọrụ ọhụụ ngwa ngwa.
Mkparịta ụka ahịa ọdịnala na-agbanwe ruo mgbe ebighị ebi. Ndị na-ere ahịa enweghịzi ike ịdabere na isi okwu okwu ọdịnala na ụdị nchọpụta iji mee ka usoro ahịa ahụ gaa. Nke a na - eme ka ọtụtụ ndị na - ere ahịa nwee obere ihe ọzọ kama ịhazigharị ma ghọta eziokwu ọhụụ banyere ihe na - eme ka mkparịta ụka ahịa na - aga nke ọma Mana, tupu anyị agaa ebe ahụ, kedu ka anyị siri bata ebe a? Ka anyị nyochaa ụzọ 3 nke mkparịta ụka ahịa gbanwere n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Site na ichoputa otu ndi ahia jiri bia mkparita uka